Nbudata Emojimix maka gam akporo [Egwuregwu] - Luso Gamer
Nbudata Emojimix maka gam akporo [Egwuregwu]
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado emojis ma na-ejikarị ndị nọ n'ime igbe ederede. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ nwere ike ịnweta nsogbu ịchọta emotes ederede. Yabụ n'ịtụle mmasị onye ọrụ wee chọọ ndị nrụpụta haziri Emojimix.
Ugbu a ijikọ ngwa egwuregwu ga-eme ka ndị na-ahụ n'anya emoji mepụta emotes dị iche iche dabere na mmetụta. Maka n'efu na-enweghị enyemaka ndị ọzọ nke mwekota. Naanị tinye ngwa egwuregwu ahụ wee nwee ọ enjoyụ emojis na-adịghị agwụ agwụ n'efu.
Iji mee ka usoro a dị mfe yana enyi na enyi, ndị mmepe na-akụnye onye nhazi ndụ. Ugbu a na-eji ihe nhazi ndụ, ndị egwuregwu na-enwe ike gbanwee ma mee ka emote mara mma karị. Ọ bụrụ na ị dịla njikere igwu egwuregwu ọhụrụ a, tinye Emoji Mix Unicode Games n'ime ama gam akporo gam akporo.
Kedu ihe bụ Emojimix Apk
Egwuregwu Emojimix bụ ngwa egwuregwu ịntanetị gbakwunyere na-anọghị n'ịntanetị ahaziri na ngalaba egwuregwu mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ndị egwuregwu nwere ike ịnweta ngwa egwuregwu ngwa ngwa site na isi mmalite gọọmentị. Ma ebe a na webụsaịtị anyị, ngwa egwuregwu nwekwara ike ibudata.
Ihe kpatara ịhazi egwuregwu ahụ bụ inye ihe dị mfe Egwuregwu 2D ikpo okwu. Ebe ndị hụrụ Emote n'anya na-enwe ike ịmepụta agwa mmetụta mmetụta dị iche iche. Na mbụ, anyị enweghị ike ịhụ egwuregwu ọ bụla yiri nke ahụ maka ndị fan.
Mgbe anyị na-ekwu maka igwu egwu aghụghọ na usoro. Mgbe ahụ ọ dị mfe ma ọ chọghị nka ọkachamara n'ihe gbasara egwuregwu. Dị nnọọ wụnye gameplay n'ime gam akporo ama iji ochie kpochapụwo usoro. Ugbu a gaa na mobile menu na malite gameplay.
Enweghị ndebanye aha ma ọ bụ ndenye aha achọrọ maka egwuregwu. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike ịpụta na ihuenyo mgbe ị na-eji ya. Mana anyị ejighi n'aka na ọnọdụ ahụ ga-adịgide. Na nso nso a, anyị na-ahụ ụfọdụ isi okwu n'ime Emoji Mix Apk.
Mmepụta Egwuregwu Unicode
Aha ngwugwu com.UnicodeGames.DefaultProject
Category Egwuregwu - mgbaghoju anya
Ndị mmepe na-ekwu na ha ga-edozi nsogbu ndị ahụ n'ụbọchị na-abịa. Ewezuga idozi okwu ndị a, ndị ọkachamara na-eme atụmatụ itinye ụfọdụ nhọrọ na atụmatụ ọhụrụ n'ime. Nhọrọ kachasị mkpa nke ndị egwuregwu ga-enweta n'ụbọchị na-abịa bụ nhọrọ nkekọrịta ozugbo.
Ndị Fans nwere ike ịmepụta ọtụtụ mkpụrụedemede emot dị iche iche site na iji customizer. Mana anaghị ekwe ka ha kesaa ndị nọ n'ime igbe ederede. Yabụ na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nhọrọ nkekọrịta ozugbo a ga-enweta ya n'oge adịghị anya.
Ozugbo akpan akpan nhọrọ agbakwunyere n'ime gameplay. Mgbe ahụ, a na-enyere ndị egwuregwu aka ịkekọrịta emoji emepụtara n'elu nyiwe dị iche iche. Usoro nke igwu egwu na itinye n'ọrụ egwuregwu dị mfe. Nke mbụ, a na-arịọ ndị egwuregwu ka ha họrọ mkpụrụedemede.
Enwere nnukwu nzọụkwụ atọ agbakwunyere. Na nzọụkwụ mbụ, onye ọkpụkpọ chọrọ ịhọrọ agwa. Mgbe ahụ gbakwunye ihe dị iche iche dị ka iko ma ọ bụ mmetụta uche. N'akụkụ ikpeazụ, a na-arịọ ndị egwuregwu ka ha tinye ihe na-enweghị usoro iji mee ka emoji na-atọ ọchị ma ọ bụ ihe ọzọ.
Anyị na-atụ anya na ndị egwuregwu ga-anụ ụtọ usoro a na-atọ ọchị. Ọ bụ ezie na Fans na-atụ anya ihe ndị ọzọ site na ngwa egwuregwu na ndị mmepe na-arụ ọrụ na nkwalite ndị ahụ mgbe niile. N'ihi ya, ị dịla njikere ịnụ ụtọ ikpo okwu egwuregwu ọhụrụ a wee wụnye Emojimix Download.
Ịmekọrịta egwuregwu ahụ na-enye ọgbọ emoji.
Agbakwunyere ihe nhazi dị ndụ.
Nke ahụ na-eme ka ndị egwuregwu nwee mmasị ịmepụta emotes dị iche iche.
Ndị ahụ gụnyere mwute, obi ụtọ, ọchị na ndị ọzọ.
A na-ahapụ mgbasa ozi ndị ọzọ.
A na-edobe interface egwuregwu ahụ dị mfe.
Otu esi ebudata Emojimix Apk
Ugbu a enwere ike ịnweta ngwa egwuregwu site na Ụlọ Ahịa Play. Mana n'ihi ụfọdụ isi okwu na mgbochi siri ike, ọtụtụ ndị egwuregwu enweghị ike ịnweta faịlụ Apk. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ gam akporo kwesịrị ime n'ọnọdụ dị otú ahụ?
N'ihi ya, ị na-enwe mgbagwoju anya ma na-achọ ebe ọzọ kacha mma. Mgbe ahụ, anyị na-akwado ndị fan ka ha gaa na webụsaịtị anyị wee budata ngwa egwuregwu kachasị ọhụrụ ngwa ngwa. Maka n'efu na-ahapụghị ikike na-enweghị isi.
N'ezie ngwa egwuregwu anyị na-ewepụta ebe a bụ nke izizi. Ọbụna tupu ịnye ya n'ime ngalaba nbudata, anyị na-etinye egwuregwu ahụ n'elu ekwentị dị iche iche. Mgbe ị wụnye egwuregwu ahụ, anyị ahụghị okwu siri ike n'ime.
Ebe a na webụsaịtị anyị anyị ebipụtala ọtụtụ ngwa egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya ndị ọzọ. Nke dị mma n'ihe gbasara egwuregwu. Iji nyochaa egwuregwu ndị ọzọ nwere ike ime, biko tinye egwuregwu ndị a. Ndị ahụ bụ Obere Planet Blast Apk na Gacha Star Apk.
Yabụ na ị na-egwu egwuregwu ahụ n'anya ma dị njikere ịmepụta ọtụtụ emoji na-agwakọta ihe dị iche iche. Wee nweta ụdị egwuregwu Emojimix emelitere. Nke ahụ bụ free ibudata na wụnye si ebe a. Dị nnọọ pịa nyere njikọ na mfe download mbụ gameplay n'efu.
Categories mgbaghoju anya, Egwuregwu Tags Egwuregwu 2D, Emoji Mix Apk, Emojimix, Emojimix Apk, Egwuregwu Emojimix Mail igodo
Egwuregwu Turbo Xiaomi Apk Nbudata maka gam akporo [Ngwaọrụ]